Ny Fomba Nitazonana Ny Hiran-drazana Hmong Ho Velona Any Andrefan’i Amerika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2016 2:47 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Ελληνικά, Français, Español, bahasa Indonesia, English
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 26 May 2016 ity lahatsoratra ity, ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifampizaràna votoaty.
Na mbola tsaratsara kokoa, eritrereto ho toy ny endrika blues fa amin'ny endriny Hmong. Ary amin'izay fotoana izay, eritrereto amin'ny fomba nieritreretan'ilay Amerikana mpanoratra, Ralph Ellison, ny blues ny kwv txhiaj : “tantaram-piainana itanisàna ireo fahavoazana manokan'ny tena aseho amin'ny alalan'ny tononkira.”
Manomboka boky iray vaovao momba ny kwv txhiaj ny fitanisàn'i Ellison sy ny iray amin'ireo mpiventy azy, lehilahy iray antsoina hoe Bee Yang. Ny zanany vavy, Kao Kalia Yang, no nanao ilay tantara, izay nahazo ny loka ho an'ny mpanoratra. Antsoina hoe “The Song Poet: A Memoir of My Father. (Ilay Poetin'ny Hira: Fahatsiarovana Ny Raiko)”
Hoavy iray izay miavaka tsy toy ny lasa rakotry ny ady. Nandositra an'i Laos nankany aminà toby iray fialokalofana tany Tailand ny rainy nandritra ny adin'i Amerikana tao Vietnam, ary tamin'ny 1987 dia nitondra ny ankohonany ho any amin'ny fanjakàna amerikàna ao Minnesota.